ယခုနှစ်ကုန် လူထုအုံကြွမှု စတင်မည် | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် ယခုနှစ်ကုန် လူထုအုံကြွမှု စတင်မည်
အပြည့်အစုံ – ဒီဗီဘီ သတင်း
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကလည်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေ အပေါ်မှာ စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်စွမ်း ကုန်နေတယ်လို့ ထုတ်ပြောလာရပါပြီ။
အမေရိကန်အပါအ၀င် အီးယူ၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေလျ တို့ကလည်း စစ်အစိုးရ အပေါ် ပြစ်ဒဏ်ခတ် အရေးယူတာတွေ ထပ်ဆင့်လုပ်နေသလို တိုးတက်မှု မရှိသရွေ့ နောင်လည်း ဆက်ပြီး ပြစ်ဒဏ် တိုးခတ်နေဦးမှာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ အတိုင်းအတာနဲ့ အရေးယူအပြစ်ပေးတဲ့ အထိတောင် ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလည်း အစီရင်ခံစာ တင်ပြပြီး စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းတုန်းက သူ စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့တာတွေကို နိုင်ငံတကာ သိအောင် ဖော်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ မိမိတိုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးကို ကြည့်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းလာအောင် နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ မျှတမှန်ကန်စွာ လုပ်ဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ။
အချိန်မနှောင်းခင် အာဏာရှင်လမ်းစဉ်ကနေ စွန့်ခွာပြီး ဒီမိုကရေစီ အရိပ်အောက်မှာ ခိုလှုံကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ခေတ်ပြောင်းနေပါပြီ။ မျက်ခုံးမွှေးတဆုံး ကြည့်ပြီး ခေတ်နောက်ပြန် မဆွဲဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
တရက် တမနက် ဆိုတာ နစ်နာဆုံးရှုံးနေရသူတွေအတွက် တန်ဖိုး ကြီးကြီးမားမားနဲ့ ပေးဆပ်နေရတာဖြစ်လို့ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှု ဆိုတာ အချိန်မရွေး ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
Like this:Like Loading...	Written by Lwin Aung Soe December 13, 2007 at 5:21 pm
Posted in ဒီဗီဘီ, ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်
« အမေရိကန် ပန်းပုဆရာက မင်းကိုနိုင် ရုပ်တု ထုလုပ်ဂုဏ်ပြု
ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲကြ »
Recent Posts (Save Burma – new site)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တနေ့တခြား သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းလာနေ November 22, 2011ရပ်/ကျေး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ဥပဒေ မရှိသင့် November 22, 2011ကျုံးကို ဖောက်ထွက်နိုင်မယ့် ဆင် November 12, 2011ခေတ်သစ်မြန်မာကို တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ November 7, 2011အစိုးရဆိုတာ လွှတ်တော်ကို အခြေခံထားရတာဖြစ်လို့ ဘာလုပ်လုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲ လုပ်ပါ။ October 18, 2011ကမ္ဘာ့လူရမ်းကားကြီး တရုတ်ရဲ့ ၂၁ ရာစု ကျုးကျော်နယ်ချဲ့ရေး မဟာဗျူဟာမှာ ပထမ ပစ်မှတ်က မြန်မာပြည် October 4, 2011မတရားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အနုတ်လက္ခဏာ October 2, 2011ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် လူထုဆန္ဒပြခြင်းသည် မဆန်းပါ။ September 26, 2011ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ၀န်ကြီးဌာနလေးခုနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကော်မတီလေးရပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်းပြောကြား September 15, 2011မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြား September 15, 2011Top PostsFirst Lady Laura Bush and Burma ထောင်ဒဏ်ကျနေသည့် လူငယ်ရှေ့နေ ဦးညီညီထွေး၏ အယူခံကို ပယ်ချ
Irrawaddy / Khit Pyaing: website URL for temporary use သီးလေးသီးနှင့် ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့်
မဲဆောက် မြန်မာပြည့်တန်ဆာ မိန်းကလေးများဘဝ တစေ့တစောင်း World focus on Burma (8 August 2008)
Mizzima (Burmese)ပြည်ထောင်စုအဆင့် တက်နိုင်ရန် အပစ်ရပ် ခိုင်မာဖို့လိုဟု KNU ပြော August 6, 2012အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအားကစားသမားများ ရလဒ်များ မကောင်း August 4, 2012ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ပြီး ရန်ကုန်ပြန် August 20, 2011ICC အမြန်ရောက်လိုသူ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဦးထူးထူးဟန် July 20, 2011နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၆ ဦး လွတ် May 17, 2011ပုဂံလက်ဆော့ March 1, 2011အင်းစိန်ဗုံး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ February 28, 2011မြသန်းတင့် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၃ နှစ်ပြည့် February 23, 2011 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦရွှေမန်းကို ကာလီဖိုးနီးယားလွှတ်တော်က အသိအမှတ်ပြုလွှာပေးအပ်အာဆီယံ ဥက္ကဌအဖြစ် မြန်မာ တာဝန်ယူဖို့ ပြင်ဆင်မှု အောင်မြင်လက်ပံတောင်းမှာ တရားဝင် ဆန္ဒပြတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နှီးနှောပွဲ ၂ဝဝဂ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး တောင်းဆိုမလေးရှားမှာ အထောက်အထားမရှိတဲ့ မြန်မာ ၅ဝ ခန့် အရေးယူခံရမိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်း ဒုက္ခသည်တွေ အိမ်ရာသစ် အစီအစဉ် လက်မခံ Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. BBC (Burmese)ရခိုငျပဋိပက်ခ တနှဈကွာ အခွအေနထေုတျပွနျသမ်မတဆီ ပို့ဖို့ ဒီကဘေီအေ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျဆီးရီးယား အရေး G 8 အစညျးအဝေးကို လှမျးမိုးထား RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldArwa Damon: Freeze-frame moments March 22, 2013It was the war everyone just wanted to forget. But fromatiny red shoe in the rubble toaresident who rebelled against al Qaeda, CNN's Arwa Damon remembers the many freeze-frame moments caused by war.Jessica Lynch, others: Where are they now? April 16, 2013Ten years ago this week, President George W. Bush announced the United States and coalition forces had begun military action against Iraq. Here'salook back at some of the people who made headlines during the war.Photos: Enduring images March 19, 2013'I'm notawelfare mom, I'masoldier' June 7, 2013Jaspen Boothe is committed to helping out homeless female veterans.Wildlife's worst enemy? Us May 30, 2013Mona Rutger got the call in October: A bald eagle was flopping around on an airport runway after it had been clipped byaprivate jet. Unfortunately, it's something she sees all too often.When the tornado hit, they were ready May 24, 2013When an EF5 tornado touched down in Moore, Oklahoma, this week, Tad Agoglia and his First Response Team of America were stationed atahotel about 30 miles away, ready to take action.Troubled youth run 'old skool' bistro May 17, 2013Asajuvenile corrections officer in Southern California, Teresa Goines found it rewarding to work with troubled youth and help them turn their lives around.Pregnant and homeless: The real cost May 9, 2013Martha Ryan couldn't believe it. She had never heard of women who were pregnant and homeless. But in one night, she met three. IPS Top newsZanzibar’s Encroaching Ocean Means Less Water June 12, 2013Scales Tip Towards Women in Jewish Religious Rights Struggle June 12, 2013Cairo’s Poor Convert Kitchen Waste Into Fuel Savings June 12, 2013Globe Less Peaceful Than Five Years Ago – Report June 12, 2013U.S. Regulatory System “Stymied by Special Interests” June 12, 2013Q&A: U.N. Looks to High Seas to Alleviate Food Crisis June 11, 2013Labour Violations Under Tight Wraps in Thailand June 11, 2013OP-ED: Are We at the Tipping Point for Ending Hunger and Malnutrition? June 11, 2013Meta	Register	Log in